မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂေါ်ဘာချော့ (သို့) ဦးသိန်းစိန်ဟာ တကယ့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား ဟုတ်ရဲ့လား | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဆဲဗင်းဂျူလိုင် ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ
Is Burma’s ‘Gorbachev’ ReallyaReformer? »
မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂေါ်ဘာချော့ (သို့) ဦးသိန်းစိန်ဟာ တကယ့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား ဟုတ်ရဲ့လား
M-Media မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂေါ်ဘာချော့ (သို့) ဦးသိန်းစိန်ဟာ တကယ့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား ဟုတ်ရဲ့လား
မတ် ၁၀ ၊ ၂၀၁၅
– လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ် ၀ါရှင်တန်ဒီစီသို့ ရောက်ရှိလာစဉ်အချိန်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန်ကို အာရှ၏ ဂေါ်ဘာချော့ (ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ခေါင်းဆောင်ဟောင်း) ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးနွေဦးသို့ ရောက်ရှိလာခြင်း သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး တင်းမာမှုလျော့ပါး လာခြင်းကို မြင်ရသည့်အတွက်ကြောင့် အမေရိကန်မြို့ကြီးတွင် ဟောပြောရန်စင်မြင့်များ၊ ဧည့်ခံပွဲများဖြင့် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားကြသည်။
ဦးသိန်းစိန်မှာ စီးပွားရေးဖွင့်ပေးခြင်းနှင့် နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေးခြင်းတို့ကြောင့် ချီးကျူးသြဘာပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ စစ်အာဏာရှင်များက မြန်မာဟု အမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး ကာလရှည် ထိခိုက်ခံစားရမှုများ ရှိခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရေး မျှော်လင့်ချက်များလည်း ပေါ်လာခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ယခင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူ ဦးသိန်းစိန်တစ်ယောက် လူတိုင်းမျှော်လင့်သကဲ့သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူ ဖြစ်ခဲ့ပြီလား?
မဖြစ်သေးသည်သာမက ယခုနှစ်မှာ ၎င်း၏ ၅ နှစ်သက်တမ်းမှ နောက်ဆုံးနှစ်သို့ပင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီ။
ဦးသိန်းစိန်က “ဂေါ်ဘာချော့နဲ့ ကျွန်တော်ဟာ မတူဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု သဲလွန်စ ပေးခဲ့ဖူးသည်။
ဦးသိန်းစိန်၏ မှတ်တမ်းများက ရှေ့နောက်လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိ။
– ရန်ကုန်တွင် လူ့အခွင့်အရေး ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကျင်းပရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်များကတော့ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းများတွင် မောင်းသွင်းခံထားရသည်။
– သူက လာဘ်စားမှုကို ဝေဖန်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကန်ထရိုက်များက ဗိုလ်ချုပ်များ၊ ၀န်ကြီးများနှင့် ပလူးပလဲနေကြသည့် ခရိုနီများထံသို့ပင် ဆက်သွားနေသည်။
– ၂၀၁၃ အကုန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွှတ်ပေးမည်ဟု သူ ပြောခဲ့သည်။ သို့သော် ပို၍ပင် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
– ကြက်ခြေနီအဖွဲ့အား အကျဉ်းထောင်သို့ ၀င်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ဒေသများတွင် ပိတ်မိနေသော ပြည်သူ ထောင်ပေါင်း များစွာအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကိုတော့ ပိတ်ဆို့ထားသည်။
– ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ရုံးခန်းကို ဖွင့်ခွင့်ပေးမည်ဟု သူက ကတိပြုထားသည်။ သို့သော် ယခုအချိန်အထိ ဖြစ်မလာသေး။
– အမုန်းတရားများကို ဆန့်ကျင်သည်ဟူ သူပြောခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မွတ်စလင်များအပေါ် မလိုမုန်းထားမှုများဖြစ်လာရန် မီးထိုးပေးနေသည့် အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်ဘုန်းကြီး ၀ီရသူအား ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
နားလည်ရခက်သည့် သမ္မတကြီးနှင့်ပတ်သက်၍တော့ ၀ိရောဓိများက ဆက်လက်ရှိနေသေးသည်။ မျက်မှန်တပ်ထားပြီး သေးသွယ်ပျော့ပြောင်းသည့် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်က ၎င်းမှာ စိတ်ဓာတ်ပျော့ပြောင်းသော အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည် ဟူသော အထင်အမြင်ကို ပံ့ပိုးကူညီပေးသည်။ ထို့ပြင် အာဏာရှင်ဟောင်း၏ အရိပ်များအတွက် ကျေးဇူးဆပ်ရန် ရှိနေသေးသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ဟီလာရီကလင်တန် ကပင် ဦးသိန်းစိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက် ဆိုသည်ထက် စာရင်းစစ်တစ်ယောက်နှင့် ပိုတူသည်ဟု ၎င်း၏ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
လေ့လာဆန်းစစ်သူများက ဦးသိန်းစိန်မှာ အခြားသော ဗိုလ်ချုပ်များထက် လာဘ်စားမှုနည်းပြီး အုပ်ချုပ်သူ အရာအရှိတစ်ယောက်အဖြစ် ရက်စက်မှု ပိုနည်းသည်ဟု ပြောကြသည်။ အချို့ကမူ ဦးသိန်းစိန်မှာ ခက်ခဲသော အခြေအနေများတွင် ဦးနှောက်သုံး တတ်သည်ဟုဆိုပြီး အသေးစားပြောင်းလဲမှုကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်ပင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်တတ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အချို့က ၎င်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တိုင်းပြည်အတွင်း လိုအပ်နေသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် ဆွဲဆောင်ရန် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအားလုံးကို ဖယ်ရှားစေရေးဖြစ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံများက ကျေနပ်သည့် ကျယ်ပြန့်သော နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲကို ဖန်တီးရန်မဟုတ်ဟု အချို့က ထင်ကြသည်။
ဒီအခြေအနေတွင်တော့ ဦးသိန်းစိန်တစ်ယောက် အတော့်ကို အောင်မြင် ခဲ့သည်။ ယခင်က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိတ်ပင်ခံထားရသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၅၀၀ ကျော်မှာ အခွင့်အရေးရခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ စစ်တပ်က လစ်ဘရယ်စီးပွားရေးကို စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၅၀ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ကိုကာကိုလာ၊ MasterCard၊ Ford နှင့် Hilton တို့က လူဦးရေသန်း ၅၀ ကျော်ရှိပြီး ဒလဟောဖြစ်နေသည့် ဈေးကွက်ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာသည်။ Kentucky ကြက်ကြော်ဆိုင်ပင်လျှင် ဖွင့်လှစ်ရန် နေရာများကို ရှာဖွေနေသည်။
သို့ရာတွင် ပုံမှန်သွားနေသည့် သတင်းထောက်များနှင့် အယ်ဒီတာများ ထောင်ချ ခံရခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတို့က ကောင်းသော လက္ခဏာမဟုတ်။ တစ်ယောက်ဆိုလျှင် မမှတ်မိလောက်အောင်ပင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရိုက်နှက်ခံရပြီး သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ (ကိုပါကြီးကို ဆိုလိုသည်) နယ်မြေများကို ဆက်လက် သိမ်းယူနေခြင်းမှာလည်း ကောင်းသော လက္ခဏာမဟုတ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများကို ဆွဲထားချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌လည်း တိုက်ခိုက်မှုများက ဆက်ဖြစ်နေသည်။ ပညာရေးလွတ်လပ်မှု မရှိခြင်းအတွက် ကျောင်းသားများ၏ ဆန္ဒပြမှုများကိုလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် စွမ်းအားရှင်များက တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်လာစဉ်က ဦးသိန်းစိန်၏ ကြိုဆိုမှုမှာ အနောက်နိုင်ငံများကို ချော့မော့ရန် အတွက် ဟန်ဆောင်ပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်သည်ကို ယခု တွေ့ရလေပြီ။ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရန် တောင်းဆိုမှုကိုလည်း ဦးသိန်းစိန်က ထပ်ခါတလဲလဲ ဥပက္ခာပြုထားသည်။ ထိုအစား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မိက်ဆက်ခြင်း သာသာလောက်သာ အချိန်ပေး၍ ၄၈ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးမှုကို ကျင်းပပေးခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြီးခဲ့သည့်တစ်ပတ်က သီးသန့်တွေ့ဆုံပြီးနောက် ပြည်တွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာ သူများက ထိုသို့ဆောင်ရွက်မှုမှာ လာမည့်နိုဝင်ဘာတွင်ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ဝေဖန်မှုများမှ သက်သာရာရစေရန် အစိုးရအား အသက်ရှုပေါက်ပေးခြင်းဟုသာ မှတ်ယူကြသည်။
ဦးသိန်းစိန်မှာ ပြောင်းလဲမှုများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့် အတွက်ကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိသနည်းဟု နာမည်ကြီး ဟာသသရုပ်ဆောင် ဇာဂနာကို မေးကြည့်သည့်အခါ ၎င်းက အသေအချာစဉ်းစား၍ ဤသို့ ပြန်ဖြေလေ၏။
“သူ့ရဲ့ ဘော့စ်အဟောင်းတွေကို ကြောက်လို့ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်”
မှန်ပါသည်။ ဦးသိန်းစိန်မှာ ၄၅ နှစ်ခန့် တာဝန်ကျေပွန်သည့် အရာရှိတစ်ယောက် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် စစ်တပ် စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိပြီး စစ်တပ်နှင့် ဆက်နွယ်မှုလည်း ရှိနေသည်။ သမ္မတရုံး ပုံစံကလည်း အားနည်းနေသည်။ ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေသည်ကို ဆိုရလျှင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ်မှာ အရေးပါဆုံး ၀န်ကြီးသုံးပါး (ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး) ကို စိတ်ကြိုက် ခန့်အပ်နိုင်သည်။ စစ်ဘက် အားထားရသောသူ အများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အကြွင်းမဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ပြဌာန်းနိုင်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည့် ကိုးကန့်ဒေသတွင် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးအာဏာကို စစ်တပ်အား မကြာသေးမီက လွဲပြောင်းပေးခဲ့မှုက နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည့် အလေးထားစရာ ကိစ္စဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဧပြီလတွင် အသက် ၇၀ ပြည့်တော့မည့် ဦးသိန်းစိန် တစ်ယောက် လာမည့် သမ္မတသက်တမ်း အတွက် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုတော့ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းဆင်းသွားသည့်အချိန်တွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို အားပေးခြင်း၊ ခြစားမှုကို အမြစ်ပြတ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ပညာရေးလွတ်လပ်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ တရားသူကြီးများအား ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်မှုကို လျှော့ချခြင်းနှင့် ညင်သာသော ဖွဲ့စည်းပုံအပြောင်းအလဲကို ပိုမိုထောက်ခံခြင်း တို့ဖြင့် မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နွေဦးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနာများကို ပြင်ဆင်ဖြေရှင်း သွားနိုင်သည်။
လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ နောက်ကွယ်တွင် ဦးသိန်းစိန်ကို ကြိုးကိုယ်ချယ်လှယ်သူအဖြစ် မှတ်ယူနေကြသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲများကို ၎င်းကိုယ်တိုင် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကြိုးရှည်ရှည်ဖြင့် လှန်ထားသူမှာလည်း ၎င်းကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်ကလည်း ထိုဆွေးနွေးမှုများကို သွေဖည်နေသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့အား ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပြန်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဦးသိန်းစိန်မှာ နာမည်ပြန်ယူနိုင်သည်။
စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ဖွင့်ပေးခြင်းအတွက် အပြန်လှန်အားဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်အရင်က ဦးသိန်းစိန်ပေးခဲ့သော ကတိများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ၎င်းအား ဖိအားပေးခြင်းဖြင့် အမေရိကန်က ကူညီနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အချိန်မလွန်ခင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပခင် ဖြစ်ရပေမည်။
** TheHuffingtonPost တွင် ဆောင်းပါးရှင် Rena Pederson ရေးသားသည့် “Is Burma’s ‘Gorbachev’ ReallyaReformer?” ဆောင်းပါးအား လေးမောင် မှ ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
This entry was posted on March 11, 2015 at 12:49 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.